China အလိုအလျောက် Stainless Steel နာနတ်သီးဖျော်ရည် စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် စက်များ စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |ခုန်ပါ။
အလိုအလျောက် သံမဏိ နာနတ်သီးဖျော်ရည် ထုတ်ယူသည့် စက်များ
အိတ်များ၊ သံဘူးများ၊ ပုလင်းများ
တစ်လလျှင် 10 Set/Sets
စံပို့ကုန် ပို့ဆောင်ရေး စံနှုန်း။ သင့်တွင် ညွှန်ကြားချက်ရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ လိုက်နာပါမည်။
1.Turnkey ဖြေရှင်းချက်။သင့်နိုင်ငံတွင် စက်ရုံကို မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သင်အနည်းငယ်သိပါက စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား စက်ကိရိယာများကို ပေးရုံသာမက တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။သင့်ဂိုဒေါင်မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း (ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ဝန်ထမ်း)၊ အလုပ်သမားသင်တန်း၊ စက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အမှားရှာပြင်ခြင်း၊ တစ်သက်တာရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှု စသည်တို့ဖြစ်သည်။
2.15 နှစ် တင်ပို့မှု အတွေ့အကြုံ၊ သင့်အိမ်သို့ ကုန်ပစ္စည်းများ လွယ်ကူစွာ ပို့ဆောင်ခြင်း။
3.customized ဝန်ဆောင်မှု, ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
4.Quality အာမခံ: 12 လ။ထို့နောက်တွင်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် သင်၏ခရီးစရိတ်နှင့် အပိုပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များပေါ်တွင်လည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်သက်တာရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။
1. အသစ်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဦးခေါင်းစနစ် (ခေါင်းတစ်လုံးတည်း သို့မဟုတ် အမွှာခေါင်းများရရှိနိုင်သည်)၊ အပြည့်အဝ PLC ထိန်းချုပ်ထားသည့် ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် လည်ပတ်မှုမုဒ်မှ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ထားသည်။
2. မတူညီသောထုတ်ကုန်များနှင့် ထုပ်ပိုးမှုစံနှုန်းများကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
3 tube sterilizer တွင် tube နှင့် ကောင်းမွန်စွာ ပေါင်းစပ်နိုင်သည်၊ အကယ်၍ filler နှင့် ချို့ယွင်းသွားပါက UHT ပိုးသတ်ဆေးမမှီသော ကြားခံကန်ထဲသို့ အလိုအလျောက်ပြန်စီးဆင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
4. ပေါင်းစည်းထားသော အလုံပိတ်အိတ်အလွတ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် အိတ်မဖြည့်မီတွင် ပိုးမွှားရှိနေမည်ကို သေချာစေသည်။
5. ဖိအားများပြည့်နှက်နေသော ရေနွေးငွေ့အား ဖြည့်စက်၏ အံဝင်ခွင်ကျ၊ ဦးထုပ်နှင့် ထိတွေ့ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းကို ပိုးသတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ မလိုအပ်ပါ။
6. အံဝင်ခွင်ကျအတွင်းပိုင်းရှိ ဖြည့်စွက်အဆို့ရှင်ကို တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် ထုတ်ကုန်ကို အထုပ်ပိတ်ဧရိယာနှင့် လုံးဝဝေးကွာစေပါသည်။
7. အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော hermetic heat sealing သည် ပျော့ပျောင်းသော ထင်ရှားသော ပိတ်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးပြီး သာလွန်ကောင်းမွန်သော အောက်ဆီဂျင် အတားအဆီးကို ပေးဆောင်သည်။
8. အဖြည့်ခံ၏ အလုံးစုံပိုးသတ်ဆေး ဒီဇိုင်းသည် အနှောင့်အယှက်မရှိ ခွင့်ပြုသည်။ပြီးပြည့်စုံသော ခရမ်းချဉ်သီး/အသီးများရာသီတစ်လျှောက် လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် သင့်အပင်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။
9. CIP နှင့် SIP ကို ​​tube sterilizer တွင်ပြွန်ဖြင့်တွဲ၍ရနိုင်သည်။
ဤမျဉ်းသည် သရက်သီး၊ နာနတ်သီး၊ သင်္ဘောသီး၊ မာလကာ အစရှိသော အပူပိုင်းအသီးအနှံများကို ပြုပြင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။ကြည်လင်သောဖျော်ရည်၊ အစိမ်းရည်၊ စူးရှသောဖျော်ရည်နှင့် ယိုတို့ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ဤလိုင်းတွင် ပူဖောင်းသန့်ရှင်းရေးစက်၊ လွှင့်ထူစက်၊ ရွေးချယ်ရေးစက်၊ စုတ်တံသန့်ရှင်းရေးစက်၊ ဖြတ်တောက်သည့်စက်၊ ကြိုတင်ချက်ပြုတ်သည့်စက်၊ အခွံခွာပြီး denudation စက်၊ ကြိတ်စက်၊ ခါးပတ်ဖျော်စက်၊ ခြားနားချက်၊ ချွေးသုံးကိရိယာများ၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် အဖြည့်စက် စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဤထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ အဆင့်မြင့် အယူအဆနှင့် အလိုအလျောက်စနစ်၏ မြင့်မားသော ဒီဂရီဖြင့်၊အဓိက ကိရိယာ အားလုံးကို အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အစားအသောက် ပြုပြင်ခြင်း၏ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု လိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝ ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ဤထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ဒီဇိုင်းသဘောတရားသည် အဆင့်မြင့်ပြီး အလိုအလျောက်စနစ်၏ မြင့်မားသောအဆင့်၊အဓိက ကိရိယာ အားလုံးကို အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အစားအသောက် ပြုပြင်ခြင်း၏ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု လိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝ ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
Whatsapp/Line/Wechat/Mobile: 008613681836263 မည်သည့်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုမဆိုကြိုဆိုပါသည်။
Turnkey ဖြေရှင်းချက်။သင့်နိုင်ငံတွင် စက်ရုံကို မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကို သင်အနည်းငယ်သိပါက စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား စက်ကိရိယာများကို ပေးရုံသာမက သင့်ထံမှ တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ဂိုဒေါင်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း (ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ဝန်ထမ်း)၊ အလုပ်သမားသင်တန်း၊ စက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အမှားရှာပြင်ခြင်း၊ တစ်သက်တာရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု စသည်တို့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို လိုက်နာကာ ပြည်တွင်း၌ သာလွန်သောစျေးနှုန်းနှင့် ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများကြောင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များသည် ကျယ်ပြန့်စွာ စိမ့်ဝင်လျက်ရှိသည်။ အရှေ့တောင်အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိက၊ တောင်အမေရိက၊ ဥရောပနှင့် အခြားနိုင်ငံရပ်ခြားဈေးကွက်များသို့။
အရောင်းအကြိုဝန်ဆောင်မှုကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်အား ၎င်းတို့၏ဖော်မြူလာနှင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများအရ အသင့်တော်ဆုံးစက်ကို အကြံပြုနိုင်ပါသည်။“ဒီဇိုင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု”၊ “ထုတ်လုပ်ခြင်း”၊ “တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ကော်မရှင်ပေးခြင်း”၊ “နည်းပညာသင်တန်း” နှင့် “ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှု”။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကုန်ကြမ်း၊ ပုလင်းများ၊ တံဆိပ်များ တင်သွင်းသူအား မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာ မည်သို့ထုတ်လုပ်သည်ကို လေ့လာရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှု အလုပ်ရုံမှ ကြိုဆိုပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်အရ စက်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာကို သင့်စက်ရုံသို့ စက်များတပ်ဆင်ရန်နှင့် လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ အလုပ်သမားများကို လေ့ကျင့်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာကို သင့်စက်ရုံသို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။နောက်ထပ်တောင်းဆိုမှုများ။ကျွန်ုပ်တို့ကို အသိပေးပါ။
1.Installation and commissioning- စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို အချိန်မီပြီး ထုတ်လုပ်နိုင်စေရန်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသည့်တိုင်အောင် စက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစတင်ခြင်းအတွက် အတွေ့အကြုံရှိ အင်ဂျင်နီယာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကို စေလွှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
2.ပုံမှန်လည်ပတ်မှုများ- စက်ကိရိယာများ၏ရေရှည်တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ နည်းပညာဆိုင်ရာပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် အခြားပေါင်းစပ်ဝန်ဆောင်မှုများထံသို့ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်မှ သုံးကြိမ်အထိ ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
3.အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာ- စစ်ဆေးရေးပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် နှစ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းရှိမရှိ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည် စက်ပစ္စည်းလည်ပတ်မှုကို အချိန်မရွေးသိရှိနိုင်စေရန်အတွက် သုံးစွဲသူနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ကိုးကားမှုမှတ်တမ်းအတွက် အသေးစိတ်စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
4. ပြီးပြည့်စုံသော အစိတ်အပိုင်းများစာရင်း- သင့်စာရင်းရှိ အစိတ်အပိုင်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်အတွက်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး မြန်ဆန်သော ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝယ်ယူသူများ၏ လိုချင်မှု သို့မဟုတ် လိုအပ်သည့် အချိန်ကာလကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ ပြီးပြည့်စုံသော စာရင်းကို ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
5. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ရေး- ဖောက်သည်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေရန်အတွက် စက်ကိရိယာများနှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိစေရန်၊ စက်ကိရိယာ၏ လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မှန်ကန်စွာ ဆုပ်ကိုင်ထားရန်၊ ဆိုက်ပေါ်တွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှု တပ်ဆင်ခြင်းအပြင်၊ထို့အပြင်၊ သင်သည် နည်းပညာကို ပိုမိုလျင်မြန်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ကူညီပေးရန်အတွက် စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ အမျိုးမျိုးကို ခေါ်ယူနိုင်သည်။
6.Software နှင့် အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများ- သင်၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား စက်ကိရိယာနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြံဉာဏ်များကို ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်စေရန်အတွက်၊ အကြံပေးအဖွဲ့နှင့် နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များကို မဂ္ဂဇင်းထံသို့ ပုံမှန်ပေးပို့ရန် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို ပေးပို့ရန် စီစဉ်ပေးပါမည်။ အကြောင်းအနည်းငယ်သိပါက စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ သင့်နိုင်ငံတွင် စက်ရုံကို မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် စက်ကိရိယာများကို ပေးစွမ်းရုံသာမက သင့်ဂိုဒေါင်ဒီဇိုင်း (ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ရေနွေးငွေ့)၊ အလုပ်သမားသင်တန်း၊ စက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အမှားရှာပြင်ခြင်းတို့မှ တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ရောင်းပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုစသည်တို့။
ယခင်- မြင့်မားသော VC ကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့် 100% သဘာဝစက်မှုလုပ်ငန်း Seabuckthorn ဖျော်ရည်ဖိစက်
နောက်တစ်ခု: ကြံဖျော်ရည်စက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
အလိုအလျောက်ဖျော်ရည် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း အပြည့်အစုံ ထုတ်လုပ်သူ...
ဒိန်ချဉ်အချဉ်ဖောက်စက် အေးခဲဒိန်ချဉ် Vendi...
အလိုအလျောက် နာနတ်သီး ဖျော်ရည် ဖျော်ရည်...
Soy Milk Whey Protein Making Machine / 2000BPH...
အလိုအလျောက် 500ml PET ပုလင်းသန့်/တွင်းထွက်ရေ...
အလိုအလျောက် အုန်းနို့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို အပြီးသတ်ပါ။